Madaxweyneyaasha dalalka Jabuuti iyo Eritrea oo ku kulmay Jeddah - Halbeeg News
Madaxweyneyaasha dalalka Jabuuti iyo Eritrea oo ku kulmay Jeddah
JEDDAH(HALBEEG) Madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo dhigiisa dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta ku kulmay magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga.
Labada madaxweyne ayaa is gacan qaaday iyagoo kulan gaar ah yeeshay, ilaa hadda lama oga arrimaha ay ka wada hadleen.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa arrintan ku tilmaamay mid bog cusub u fureysa horumarka iyo xiriirka labada dal.
“Waa mid kale oo weyn una soo hooyatay gobolka, halkan waxaa ka bilowday horumarka iyo xiriirka labada dal ee Jabuuti iyo Eritrea, Geeska Afrika wuxuu u guuray, nabad, xasilooni iyo horumar”ayuu yiri wasiirka maaliyadda Jabuuti oo bartiisa Twitterka soo dhigay qoraalka.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta gaaray magaalada Jeddah halkaasoo ay ugu sii horeeyeen madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Dowladda Sacuudiga ayaa dadaal ugu jirta sidii loo soo afjari lahaa loolanka siyaasadeed ee ka dhexeeya dalalka Geeska Afrika iyadoo maalintii shalay dalkaasi ay heshiis ku kala saxiixdeen hogaamiyeyaasha labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea.
Madaxweyneyaasha dalalka Jabuuti iyo Eritrea ayaa lagu wadaa in kulamada kadib si wada jir ah u soo saaran qodobada labada dhinac ay isku afgarteen iyadoo wada hadaladaan ay garwadeen ka tahay dowladda Sacuudiga.
Dowladda Qadar oo meel marisay heshiisyo ay wada galeen Qadar iyo Soomaaliya
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maalintii labaad ka doodaya arrimaha amniga